တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ - ၆
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Lee Sang-hwa အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားနိုင်ငံစစ်သံမှူး Colonel Hwang Sandeok တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ သံတမန်ဆက်ဆံရေး သည် ၄၅ နှစ် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေကောင်း၊ မိတ်ဆွေဟောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကာ သမိုင်းကြောင်းအရ တူညီမှုများ ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံမူအတိုင်း လက်ခံဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး အာဆီယံအနေဖြင့် အာရှနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အရေးကြီးသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတိုင်းတွင် တိုင်းပြည်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာရှိသဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်ကြရန်အရေးကြီးသည့် အခြေအနေများ၊ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် နျူကလီးယားနှင့် ဖျက်အားပြင်းလက်နက်များကင်းစင်ရန်လိုအပ်သည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေနှင့် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများ၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြား ဆက်ဆံရေးများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လေ့ကျင့်ရေး ဆိုင်ရာများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့ သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယား သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Lee Sang-hwa အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားနိုငျငံစဈသံမှူး Colonel Hwang Sandeok တို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ၏ သံတမနျဆကျဆံရေး သညျ ၄၅ နှဈ ကွာမွငျ့ပွီဖွဈပွီး မိတျဆှကေောငျး၊ မိတျဆှဟေောငျးနိုငျငံမြားဖွဈကာ သမိုငျးကွောငျးအရ တူညီမှုမြား ရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ ကိုရီးယားနိုငျငံနှငျ့ အာဆီယံနိုငျငံမြား ကဏ်ဍပေါငျးစုံတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ လကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ အာဆီယံမူအတိုငျး လကျခံဆောငျရှကျ သှားမညျဖွဈပွီး အာဆီယံအနဖွေငျ့ အာရှနိုငျငံမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုသညျ အရေးကွီးသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးလကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြား ခြုပျငွိမျးရေးအတှကျ တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နိုငျငံတိုငျးတှငျ တိုငျးပွညျအားသညျ ပွညျတှငျးမှာသာရှိသဖွငျ့ စညျးလုံးညီညှတျကွရနျအရေးကွီးသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ကိုရီးယားနှဈနိုငျငံ ပွနျလညျပေါငျးစညျးရေးနှငျ့ ကိုရီးယားကြှနျးဆှယျအပါအဝငျ တဈကမ်ဘာလုံးတှငျ နြူကလီးယားနှငျ့ ဖကျြအားပွငျးလကျနကျမြားကငျးစငျရနျလိုအပျသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး အတှကျ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံမှ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ စီးပှားရေးဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု အခွအေနနှေငျ့ တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အလားအလာမြား၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျ အကွား ဆကျဆံရေးမြား တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးနှငျ့ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ၊ လကေ့ငျြ့ရေး ဆိုငျရာမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီးတို့ သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။